SIDA LOO CIRIBTIRO BEERTA BEERTA: TALOOYIN KA YIMAADA FIISOOYINKA KHIBRADA LEH - SOOSAARKA DALAGGA
Sidee looga takhalusi karaa bjørkulul-beerta beerta
Dhammaan beeraleyda iyo beeraleyda oo aan ka reeban waxay ka walwalsan yihiin xakamaynta cawska. Waxaa jira caws la jarayo oo laga soo qaado beerta si fudud oo degdeg ah. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira tiro ka mid ah dhirta waxyeellada leh, kuwaas oo aad u adag in laga baxo. Mid ka mid ah wakiilada cayayaanka noocan oo kale ah waa ciriiri, iyo qodobkan waxaad ku baran doontaa sida loola macaamilo.
Sidee ayuu ufilmaashu u eg yahay
Bindweed Field (waxaa sidoo kale loo yaqaan 'bjørk, loaki ama xayawaan') waa nooc ka mid ah warshad geedka dilaaga ah ee qoyska dadka waawayn. Waxay leedahay nidaam xidid oo ballaaran, lafdhabarkuna waxay ku dhex fiiqi karaan ciidda si qoto dheer oo ku dhow saddex mitir.
Bindweed wuxuu leeyahay ubaxyo jilicsan oo qurux badan oo casaan ah, guduud ah ama caddaan, kuwaas oo Bloom May ilaa August. On peduncle kasta waa laga bilaabo hal ilaa saddex ubax. Bindweed waxaa laga heli karaa wadamo badan oo Yurub iyo Aasiya ah.
Baro hababka loola tacaalayo hurdo la'aanta, lo'da cawska, quinoa, dodder, beertii beertii beertii, caanaha, løndag.
Qaadashada ubaxyada jilicsan ee qulqulaya xayndaab ama duufaan, midna waa in aan iloobin in quruxdu ay noqon karto mid khiyaano leh. Xaaladdan oo kale waa. Sababtoo ah nidaamka xidid adag ee loax qoyaan ka soo carrada, taasoo keenta in qalajinta. Waxay sidoo kale u oggolaanaysaa inuu ku noolaado inta lagu jiro abaarta.
Waa muhiim! Wadahadaladu waxay la mid yihiin caleemo dhif ah waxay gaari karaan laba mitir oo dherer ah waxayna burburin karaan dhirta beeraha oo dhan muddo gaaban, isku dhejin iyo ka saari kara nafaqooyinka iyo nalka.
Bindweed sidoo kale waa mid aad u firfircoon. Waxay dacaayad u tahay caawinta abuurka iyo nidaamka xididka. Seeds xajisto awooda Gaaban ee muddo saddex sano ah, iyo qayb yar oo ka mid ah xididkii ku haray dhulka ayaa si sahlan u qaadi kara xididada oo nolol u siinaya koox cusub oo haramaha.
Hase yeeshee, taasi maahan. Marka lagu daro sifooyinka khatarta ah ee geedka laftiisa, loax waa cirifka cayayaanka beerta badantaas oo, dabcan, kaliya sii xumaynaya xaaladda. Haddii aad ka yaabisay sida looga saaro caleenta beerta beerta, talada fiisooyinka khibrada leh ayaa kaa caawin doona.
Ma taqaanaa? Diiwaangelinta dhererka xididada waa dhir, kaas oo ku koraya bariga Afrika ee u dhow godadka Echo. Xididdadiisa waxay dib ugu noqotaa ilaa 120 mitir!
Sida loola shaqeeyo gawaarida goobaha
Bindweed Field waa beer khafiif ah, laakiin waxaa jira. habab ku filan oo wax looga qabto:
hababka xakamaynta bayoolojiga;
Waxaa isla markiiba la ogaan karaa in Fiisooyinka ay kugula talinayaan isticmaalka dhowr hab ama dhammaantood si gabi ahaanba uga takhalusi weelka.
La qaboojiyeyaasha beeraha
Dhirbaaxada wakhtiga ah waxay badbaadin kartaa beertaada.
Waxaa lagama maarmaan ah in si taxadar leh u xulato dhammaan haraadiga nidaamka xididka geedka, tan iyo markii ay ka qaadi karaan xidid iyo siin caleemo. Waxa ugu fudud in la isticmaalo rinjiga si aan loo yareeynin xididada adag iyo kuwa dheer.
Si aad uga saarto caws, waxaad isticmaali kartaa aalado kala duwan, sida Fokin's ploskorez.
Caawin karaan iyo qaybo madow oo daboolan. Waa in lagu faafaa meelahaas oo ah xuduudaha ay koraan. Laga soo bilaabo la'aanta qorraxda, caleemaha si deg deg ah u dhiman doonaa, iyo dhammaan inta hartay waa in laga saaro xididada ka soo ciidda. Qaabka kale waa isticmaalka ash, kaas oo hoos u dhigaya aysidhka carrada. Oo tan iyo lo'da ayaa doorbidaya carrada acid, waxa ugu dhakhsaha badan u dhiman doonaa.
Hababka bayoolojiga ee halganka
Aynu ogaanno sida loola macaamili doono geedaha cagaarka ah adigoon isticmaalin walxaha waxyeelada leh ee beertaada. In this waxay ku caawin kartaa beeritaanka sideratov. Kuwani waa dhirta cagaarka ah ee si dhaqso ah u soo baxaan waxayna leeyihiin korriin qaro weyn. Kuwaas waxaa ka mid ah iniin khardal ah, dhir, canola. Waxay u shaqaynayaan sidii xannibaad looga hortagi lahaa oo looga hortagi lahaa weedka ka soo baxa.
Habka ugu habboon waa mulching leh qalabka dabiiciga ah, sida sida balka, chips wood ama caws. Waxaa lagama maarmaan ah in lagu daboolo ciidda leh lakab qaro weyn oo ka tago mulchka illaa hal sano. Ka dib, si qoto dheer u qodo oo isku day in aad doorato haraadiga xididada.
Akhri sidoo kale haddii cawska cawska ay dili karaan caws.
Haddii aysan jirin waqti ama fursad ay ku qaataan maalinta oo dhan beerta, ka dibna waxaad isticmaali kartaa daaweynta dadweynaha. Saliidku waa hab la awoodi karo oo wax ku ool ah. Waxaa lagama maarmaan ah in la burburiyo 1.2 kg oo cusbo ah oo ku jirta 10 litir oo biyo ah kuna buufin xal xalka ugu badan ee ku baxda cawska.
Waxa kale oo aad isku dayi kartaa adigoo isticmaalaya xal soodhaha sareeya ama suntan acid. Waxaa lagama maarmaan ah in ay si toos ah ugu buufinayaan wejiga laftiisa iyo masaafada 20-30 cm ee dhirta laga beero.
Waa muhiim! Ma siin kartid beerta vinyu, waa in laga saaro beerta isla markiiba ka dib muuqaalka.
Burburinta lafaha ayaa sidoo kale noqon doona dhulka qodaya.
Iyadoo caawimaadda "chemistry"
Haddii dariiqooyinka kor ku xusan aysan caawinin ama aad u baahan tahay si dhakhso ah u xaqiijiso waayista miraha beerta, ka dibna herbicides waxay keeni doontaa natiijada la rabay in la dagaallamaan gorgortanka beeraha.
Mid ka mid ah kiimikooyinka ugu wax ku oolka ah waa Roundup. Laga soo bilaabo 10 ilaa 120 ml oo badeeco ah ayaa badiyaa lagu daraa 10 litir oo biyo ah. Qaadashada waxay kuxirantahay dhirta u baahan in laga daweeyo geedkii. Xalkan ayaa lagu buufinayaa dhammaan caleemaha geedka. Haddii uu jiro sariirta dillaacsan ee sariirta, markaa waxaad u baahan tahay inaad miraha ka ilaaliso dhalooyinka dhalada ah ama aad jarjartey dhalooyin caag ah.
Waxaad u baahan tahay inaad ka taxadarto in Roundup aysan ku jirin warshadda beeraha, haddii kale waxay dhiman doontaa. Daroogadani waa mid aad u sun ah. Ka dib markaa, sug in muddo ah. Ubaxyada iyo caleemaha qandhada ayaa marka hore bilaabi doona inay ciribtirmaan dabadeedna si buuxda u qalajaan. Si kastaba ha ahaatee, waa in aan si dhaqso ah looga saarin.
Waa lagama maarmaan in dawada ay gabi ahaanba burburiso nidaamka asaasiga ah. 3-4 maalmood ka dib, calaamadaha ugu horreeya ee dhimanaya waxay u muuqdaan, iyo 10-14 maalmood ka dib, caleemaha waa laga saari karaa. Marka la shaqeynayo daroogada, waxaa lagu talinayaa in la isticmaalo gacmo gashi ka dib iyo ka dib marka la barbar dhigo si ay u daadiyaan xalka soo haray meel ka fog goobta.
Waa muhiim! Si daawooyinka ay u dhaqmaan sida ugu wanaagsan ee suurtogalka ah, waxaad u baahan tahay inaad dooratid waqtiga saxda ah ee lagu shaqeynayo gundhiga. Warshadu waxay leedahay weji noocyo ah marka nafaqadu aysan ka soo bixin asalka si ay caleemaha u noqoto, laakiin sida kale. Waqtigaan gaar ah, natiijada la rabo in laga isticmaalo geed-geedka ayaa la damaanad qaadi doonaa.
Waxaa jira sifooyin kale oo kiimiko ah - "Tornado", "Hurricane", iwm. Waa lagama maarmaan in loola dhaqmo si la mid ah. Waxaa lagama maarmaan ah in si taxadar leh loo akhriyo tilmaamaha oo si adag u hoggaansamaan tilmaamihiisa. Helitaanka caleemaha, jirridda iyo ubaxyada, herbicides waxay gashay nidaamka asaasiga ah iyo burburin, iyo iyada oo leh bindweed laftiisa.
Guga iyo xagaaga dambe waxay ku haboon yihiin wax soo saarka. U diyaargarowga lafaha uma baahna isla markiiba, sida marka la isticmaalayo Roundup. Diyaargarowgu wuxuu u baahan yahay waqti si loo burburiyo nidaamka xididka. Ka dib markii la buufiyo, kaliya 2-3 toddobaad kadib markaad qodo oo aad furto dhulka. Iyada oo qiyaasta qaldan, caleemaha iyo ubax waa la burburin doonaa, iyo xididdada weedka ku jiri doonaan dhulka.
Ma taqaanaa? More Laga soo bilaabo waqtiyadii hore, sifooyinka bogsoodka ah ee loo yaqaan 'convolvulus. Dhaqtarkiisa, dhakhtarka reer Faaris ee reer Avic Avicenna wuxuu isaga u isticmaalay daaweynta cudurrada sambabada, beerka iyo beeryarada.
Laga soo bilaabo bindweed beerta, sida aad hore u fahamsan, waxaa suurtagal ah in laga takhaluso. Isku day inaad ku bilawdo habab aad u adag, iyo haddii dagaalku uu noqon doono mid aan sinayn, ka dibna isku xir xawayaanka. Nasiib wacan iyo sabir kuu ah goobta dagaalka
Noocyo Cherry ah
Dhirta sanadlaha ah
Beeraha guinea ee taranta